Medical Chigadzirwa Mould Vagadziri uye vanotengesa - China Chigadzirwa Chigadzirwa Mould Factory
Medical chishandiso kavha epurasitiki muforoma
Nemakumi emakore einjiniya chaiyo jekiseni kuumbwa kwekushandisa kwekurapa, Yuanfang akawana ruzivo rwakawandisa uye akavandudza hunyanzvi hwakagadziriswa mukutarisana nezvinodiwa zvakasiyana zveindasitiri yezvokurapa.
Yuanfang Technology ndeye ISO9001: 2015 setifiketi fekitori inotarisana nekuvandudza, dhizaini uye yekugadzira epurasitiki jekiseni kuumbwa uye epurasitiki yakaumbwa zvikamu zvemishonga ekurapa.
Medical epurasitiki zvinoriumba jekiseni muforoma
Kune akasiyana mashandisirwo uye zvigadzirwa izvo zvepurasitiki jekiseni kuumbwa zvinotsigira mune zvekurapa zvinosanganisira mazino zviridzwa, zvekuvhiya implants, tsono, machubhu
Kwemakumi emakore apfuura, Yuanfang Technology yakapa chaiyo jekiseni tooling uye zvikamu zvakaumbwa kune mamwe emakambani makuru ekurapa munyika. Chiumbwa chekurapa, chaisanganisira kuraswa zvigadzirwa zvekurapa, zvekurapa zvigadzirwa zvemukati zvikamu uye mapurasitiki edzimba.
Yemhando yepamusoro ekurapa mafuru anowanzoenderana neyakaumbwa dhizaini maitiro.
Yuanfang anoshandisa chemberi dhizaini software kuongorora chakuvhuvhu, kuti igone kunyatso kuona izvo zvakashata mukugadzirwa, tarisa kana chakuvhuvhu chine matambudziko eweld line, warpage, shrinkage, nezvimwewo, kugadzirisa kugona kwekugadzira, uye kugadzira mhando yepamusoro uye yepamusoro nemazvo Medical muforoma.
Yedu dhizaini timu ine ruzivo rwakakura mukugadzirisa mamiriro epurasitiki muforoma zvikamu, tichidzivirira mhinduro kutadza usati wagadzira mafuru, kuchengetedza mari uye kupfupisa yako yekuvandudza nguva.
KuYuanfang kwakagadzwa wenguva yakazara purojekiti mainjiniya kuti iwe unzwisise kufambira mberi kweprojekti, semuenzaniso, kupa purogiramu yevhiki nevhiki, kubva purojekiti kutanga kusvika pakuumbwa kweforoma, uye maitiro ese ari pachena kwauri.
KuYuanfang, kunyangwe chakuvhuvhuta ichi chimwe-mhango kana mizhinji-mhango yepurasitiki jekiseni muforoma yezvigadzirwa zvekurapa, tinogona kugadzira prototypes, verification mafomu, uye akateedzana mafomu.
Iyo yakajairwa mhango uye yakakosha simbi: S136, H13, 8407, NAK80, nezvimwe.
Product zvinhu: PP, ABS, PC, HDPE, PS, PBT, PA6 + GF, POM, PC / ABS, TPE, TPU, etc.
Hupenyu hwehuvhu hunogona kuva mamirioni 1.5.
Iyo fomu inogona kugadzirwa nehuremu hwe15T uye hukuru hukuru hwe1M.
Isu tasimbisa hukama hwakanaka hwekudyidzana nevatengi muEurope, America uye Southeast Asia Kuburikidza nepurasitiki muforoma.
Taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo nezve edu ekurapa anoumba uye ekurapa epurasitiki jekiseni kuumbwa masevhisi, kana kukumbira quote nhasi. Tiri premier wako zvokurapa epurasitiki jekiseni Kuumbwa uye zvokurapa kumumvuri kukura nyanzvi.
Jekiseni Kuumbwa Kwakanaka Kudzora Maitiro
Kuvimbiswa kwemhando yakakosha kana zvasvika kune epurasitiki jekiseni kuumbwa, YF Mould inoita zvemhando yepamusoro kutonga mukati meyese nzira yekugadzira. Yedu epurasitiki kuumbwa kwemhando yepamusoro kutonga kwakabatanidzwa mune ese maitiro kuitira kuti chigadzirwa chekupedzisira chaunogashira chisangane neako magadzirirwo. Muitiro epurasitiki Kuumbwa yepamusoro kudzora zvinotevera.
Raw Raw Kuongorora
Zvese mbishi zvigadzirwa zvinosimbiswa kuve vanokwanisa. COA, RohS uye REACH magwaro anogona kupihwa.
Zvikamu zvinotanga kuongororwa zvakananga kunze kwekuumbwa muchina. Hunyanzvi hweVimbiso Assurance vakadzidziswa kuona uye kugadzirisa zvisipo zvinotevera:
• Makapu ekunyura
• Pfupi pfuti
• Kupisa mamaki
• Flash mavanga
FAI - Yekutanga Chinyorwa Kuongorora
Chinyorwa chekutanga kuongorora (FAI) inosimbisahes basa iro chigadzirwa chako chakagadzirwa kune zvakatemwa. Chinhu chega chega chakakomba dhizaini yakamisikidzwa pachikamu chekudhirowa ichave yakasimbiswa uye yakanyorwa. Isu tinoita FAI pane ese mitsva yezvikamu odha uye tinogona zvakare kupa iyo FAI dhata mushure mekuita chero maitiro ekuchinja kana zvichidikanwa.
PPAP: Kugadzira Chikamu Chekubvumidza Maitiro
Yedu yekugadzira zvikamu mvumo maitiro inoita kuti vatengi mumaindasitiri ese kuve nechivimbo mune yedu yekugadzira maitiro. Chiyero chaicho chezvikamu zvakagadzirwa chakaitwa uye chakashandiswa kupedzisa bvunzo dzakasiyana panguva yePPAP. Izvi mhando epurasitiki Kuumbwa yepamusoro kudzora ndehwokuti nechokwadi kuti magadzirirwo edu uye kugadzirwa pezvakaitwa kusangana vatengi zvinodiwa.
Jekiseni Kuumbwa Nesimbi Inoisa, Plastic Kuisa richigadzirisa, Tsika Mould, Prototype Mould Vagadziri, Mould Vagadziri, Mould Factory,